Digix DAO စျေး - အွန်လိုင်း DGD ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Digix DAO (DGD)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Digix DAO (DGD) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Digix DAO ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $86 595 981.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Digix DAO တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Digix DAO များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
Digix DAODGD သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$70.87Digix DAODGD သို့ ယူရိုEUR€60.16Digix DAODGD သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£54.3Digix DAODGD သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.64.73Digix DAODGD သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr642.3Digix DAODGD သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.448Digix DAODGD သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč1583.37Digix DAODGD သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł265.49Digix DAODGD သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$94.9Digix DAODGD သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$99.07Digix DAODGD သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$1585.19Digix DAODGD သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$549.28Digix DAODGD သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$384.12Digix DAODGD သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹5317.02Digix DAODGD သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.11899.36Digix DAODGD သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$97.29Digix DAODGD သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$107.44Digix DAODGD သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿2212.37Digix DAODGD သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥493.82Digix DAODGD သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥7508.22Digix DAODGD သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩84324.95Digix DAODGD သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦26860.38Digix DAODGD သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽5227.69Digix DAODGD သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴1959.66
Digix DAODGD သို့ BitcoinBTC0.00617 Digix DAODGD သို့ EthereumETH0.191 Digix DAODGD သို့ LitecoinLTC1.25 Digix DAODGD သို့ DigitalCashDASH0.748 Digix DAODGD သို့ MoneroXMR0.772 Digix DAODGD သို့ NxtNXT5100.64 Digix DAODGD သို့ Ethereum ClassicETC10.37 Digix DAODGD သို့ DogecoinDOGE20560.6 Digix DAODGD သို့ ZCashZEC0.775 Digix DAODGD သို့ BitsharesBTS2791.64 Digix DAODGD သို့ DigiByteDGB2654.15 Digix DAODGD သို့ RippleXRP245 Digix DAODGD သို့ BitcoinDarkBTCD2.46 Digix DAODGD သို့ PeerCoinPPC246.63 Digix DAODGD သို့ CraigsCoinCRAIG32462.08 Digix DAODGD သို့ BitstakeXBS3038.98 Digix DAODGD သို့ PayCoinXPY1243.8 Digix DAODGD သို့ ProsperCoinPRC8940.47 Digix DAODGD သို့ YbCoinYBC0.0381 Digix DAODGD သို့ DarkKushDANK22837.7 Digix DAODGD သို့ GiveCoinGIVE154140.33 Digix DAODGD သို့ KoboCoinKOBO16770.38 Digix DAODGD သို့ DarkTokenDT65.28 Digix DAODGD သို့ CETUS CoinCETI205555.63